Vatsim-piofanana : vonona amin’ny fampandrosoana ny tanora Yali | NewsMada
Par Taratra sur 12/02/2016
Nihaona tamin’ny filoha Rajaonarimampianina Hery, omaly, ny solontenan’ireo tanora malagasy nahazo ny vatsim-piofanana nankany Etazonia antsoina hoe « Mandela Washington Fellowship » ny taona 2014 sy 2015.
Tafiditra ao anatin’ilay fandaharan’asan’ny filoham-pirenena amerikanina, Barack Obama, Young African Leaders Initiative (YALI) na fandaharanasa ho an’ny tanora mpitarika aty Afrika ity vatsim-pianarana ity.
Niaraka tamin’ny tompon’andraikitry ny masoivoho amerikana sy ny USAID ary notarihin’ny masoivoho Robert Yamate izy ireo tamin’izany. Nandritra ny fihaonana, nanazava tamin’ny filoha Rajaonarimampianina ny tetikasa sy ezaka tian’izy ireo hotratrarina mba hampandrosoana ny firenena ireo tanora mpitarika ireo.
Ohatra amin’izany ny eo amin’ny sehatry ny ady amin’ny kolikoly, ny fanampiana ny tanora hahazo fampindramam-bola madinika sy hanana fahaiza-mitarika, ny famokarana angovo azo havaozina ary ny fiarovana ny tontolo iainana.
Nankasitrahan’ny filoha malagasy ity fitsidihana ity ary nilaza ny hanohana ny ezaka izay ataon’ireo tanora Yali ireo ny tenany indrindra ny tetikasa mifandraika amin’ny ady amin’ny kolikoly.
Nandritra ity fihaonana ity, nilaza ny masoivoho Robet Yamate fa hitombo avo roa heny amin’ity taona ity ny isan’ireo tanora afrikanina hahazo ny vatsim-piofanana « Mandela Washington Fellowship » ka raha 500 isan-taona izany teo aloha, tafakatra 1000 manomboka amin’ity taona ity.
Antenaina fa hitombo isa ihany koa, araka izany, ireo tanora malagasy izay ho voafantina hahazo io vatsim-piofanana io amin’ity taona ity.